AHOANA NY FOMBA HANAMBOARANA NY FIHENAN'NY FEO AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Ahoana ny fomba hanamboarana ny fihenan'ny feo amin'ny Windows 10
Moa ve ianao mahatsapa fihenan-doha, mihetsiketsika, na feo voahitsakitsaka avy amin'ireo mpandahateny na headphone anao amin'ny rafitra Windows 10? Eny, tsy irery ianao. Andao hojerentsika ny fomba fanitsiana ny olana amin'ny feo tsy mitombina na fanovana ao amin'ny Windows 10.
Mpampiasa Windows 10 marobe no nitaraina fa sendra olana amin'ny feo mahery setra ao amin'ny rafitr'izy ireo izy ireo. Mety hahafinaritra sy mahasosotra tokoa izany rehefa mijery sarimihetsika, mihaino mozika, ary indrindra rehefa manatrika fivoriana virtoaly. Amin'ity toro-lalana ity dia handeha hanao lisitra ireo mety ho antony sy vahaolana hamahana ny fijanonan'ny feo ao amin'ny solosaina Windows 10 izahay. Noho izany, mamakia hatrany.
Ahoana ny fomba hamahana ny olana momba ny audio distorior amin'ny Windows 10
Inona no mahatonga ny olana amin'ny fihenan'ny feo ao Windows 10?
Fomba 1: Atsaharo ny solosainao
Fomba 2: Atsaharo ny fampivoarana audio
Fomba 3: havaozy ireo mpamily audio
Fomba 4: Atsaharo indray ireo mpamily Audio
Fomba 5: ovaina ny fanovana endrika audio
Fomba 6: esory ny mpamily Network Conflicting
Fomba 7: Atsaharo ny fitaovana fampidirana sy famoahana
Fomba 8: Mihazakazaha Audio Troubleshooter
Fomba 9: Avereno ny drafitra herinaratra CPU
Betsaka ny antony mahatonga anao hiaina ilay olana miakanakam-peo ao amin'ny Windows 10. Ireto misy:
1. Mpamily feo efa lany andro: Raha efa lany andro ny mpamily feo ao amin'ny rafitrao dia misy ny mety hahitana olana amin'ny feo tsy mitongilana amin'ny rafitra Windows 10 anao.
2. Fanatsarana feo: Windows 10 dia miaraka amina fampiroboroboana feo an-tserasera hanomezana kalitao feo tsara kokoa. Saingy, raha tsy mandeha amin'ny laoniny no mety ho antony aorian'ity olana ity.
3. Diso famolavolana ireo fanamafisam-peo: Raha natao teo amin'ny solo-sainanao ny fikirakira fanamafisam-peo diso, dia mety hiteraka olana amin'ny fiakanjoana izany.
Nitanisa vahaolana vitsivitsy izahay mba hahafahanao manandrana manamboatra feo amin'ny st Windows 10 PC.
Ny ankamaroan'ny fotoana, ny famerenana fotsiny fotsiny ny solo-sainao dia ny findainao, ny solosainao finday, ny solosainao, sns., Manala ireo olana kely sy olana madinidinika. Araka izany, a avereno indray mety hanampy anao amboary ny olana Windows 10 miakanakam-peo .
1. Tsindrio ny Kitendry Windows amin'ny klavier hanokafana ny Menio fanombohana .
2. Tsindrio eo fahefana , ary safidio Haverina velomina , araka ny aseho.
Raha vao manomboka indray ny PC dia zahao raha misy olana momba ny fanodikodinam-peo rehefa mampiasa mpandahateny na headphone ianao. Raha izany dia andramo ny vahaolana manaraka.
Ny fanamafisam-peo dia fampidirana ao amin'ny Windows 10 izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo traikefa amin'ny feo malefaka sy tsy misy fiatoana. Na izany aza, matetika, ny fanamafisam-peo dia fantatra fa mahatonga ilay audio hanova na hiakanakam-piteny. Noho izany, ny fampandehanana fanamafisam-peo dia mety hanampy anao hamaha ny olan'ny fanodikodinam-peo ao amin'ny Windows 10. Araho ireto dingana ireto mba hanajanonana ity fampiasa ity:
1. Karazana Mihazakazaha ao amin'ny Fikarohana Windows apetaho ary atombohy amin'ny valin'ny fikarohana.
2. Raha tsy izany, tsindrio am-baravarankely + R fanalahidy miaraka hanokatra ny boaty fifampiresahana Run.
3. Raha vao ny Mampandeha boaty fifampiresahana mipoitra eo amin'ny efijeryo, karazana mmsys.cpl ary namely Ampidiro . Jereo eto ambany ny sary.
4. Ankehitriny, tsindrio havanana amin'ny anao fitaovana playback misy anao default ary tsindrio eo Properties .
5. Hiseho eo amin'ny efijery ny fikandrana vaovao. Eto, mifamadiha amin'ny Fanatsarana kiheba eo ambony.
6. Manaraka, jereo ilay boaty eo akaikin'ny safidy mitondra ny lohateny Atsaharo ny fihenan'ny feo rehetra , araka ny aseho etsy ambany.
7. Tsindrio eo ok hitahiry ireo fanovana.
Ankehitriny, milalao hira na horonan-tsary hijerena raha efa voavaha na tsia ny olana mampihetsi-po na tsia.
Raha tsy izany dia ampiharo ireto fomba manaraka ireto mba hanavaozana sy hametrahana ireo mpamily feo amin'ny solosainao Windows 10.
Vakio ihany koa: Tsy misy feo ao amin'ny PC Windows 10 [VAHAOLANA]
Miharihary fa ny mpamily feo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanomezana traikefa audio tonga lafatra. Raha mampiasa andiany efa antitra an'ny mpamily feo amin'ny solo-sainao ianao dia mety hahita olana manafintohina feo. Ny fanavaozana ny mpamily anao amin'ny kinova farany dia afaka manampy anao manamboatra ny lesoka.
Araho ireto dingana ireto mba hanaovana izany:
1. Ao amin'ny Fikarohana Windows bara, karazana mpitantana Fitaovana ary namely Ampidiro .
2. Sokafy ny Mpitantana Fitaovana avy amin'ny valin'ny fikarohana.
ny fomba fanaovana teny nisafidy
3. Mikorisa midina mankany amin'ny Feo mifehy ny feo, horonan-tsary ary lalao fizarana ary kitiho indroa eo aminy hanitarana azy.
4. Ankehitriny, tsindrio havanana mpamily feo ary safidio ny Fanavaozana ny mpamily safidy, araka ny aseho etsy ambany.
5. Hiseho ny varavarankely vaovao. Eto, kitiho Mitadiava mpamily ho azy , araka ny aseho.
6. Andraso ny solosainao ho mandeha ho azy Notarafina SY vaovao farany ny mpamily anao.
Ary farany, aorian'ny fanavaozana ny mpamily feo, zahao raha nahavita namaha ilay olana Windows 10 niakanakam-peo ianao.
Ny mpamily feo dia mety ho simba ary mety hiteraka olana maro amin'ny audio amin'ny rafitrao, ao anatin'izany ny fiakanakanan'ny feo na ny fanodikodinana. Amin'ny toe-javatra toy izany, mila esorinao ireo mpamily feo tsy mandeha amin'ny laoninao ary avereno apetrakao ao amin'ny rafitranao amboary ny tabataban'ny feo ao amin'ny Windows 10. Araho ny dingana omena anao amin'ny fametrahana indray ireo mpamily feo ao amin'ny Windows 10:
1. Mandrosoa Mpitantana Fitaovana araka ny nohazavaina tamin'ny fomba teo aloha. Jereo ny sary eto ambany raha mila fanazavana.
2. Ankehitriny, midina midina ary kitiho indroa eo Feo mifehy ny feo, horonan-tsary ary lalao hanitatra ny menio.
3. Kitiho havanana amin'ny mpamily feo ary tsindrio eo esory , araka ny aseho etsy ambany.
4. Aorian'ny famafana ny mpamily feo, tsindrio havanana amin'ny efijery ary safidio Sakano ny fiovan'ny fitaovana. Jereo ilay sary nomena.
5. Miandry ny solosainao mandeha ho azy scan sy hametraka ireo mpamily audio default amin'ny rafitrao.
Ary farany, avereno indray ny solosainanao ary zahao raha nahavita nanamboatra ilay olana fikorontanana am-peo tamin'ny Windows 10 ianao.
Indraindray, ny mpamily anao dia mety tsy manohana ny endrika audio napetraka ao amin'ny rafitranao. Ankoatr'izay, raha afaka nanao endrika audio avo lenta , mety hahita olana mampiakanakam-peo ianao. Amin'ity scenario ity dia mila manova ny fandefasana endrika audio amin'ny kalitao ambany ianao hamahana ity olana ity, araka ny nohazavaina etsy ambany:
1. Press Windows + R fanalahidy miaraka hanokatra ny Mampandeha boaty fifampiresahana . Eto, karazana mmsys.cpl SY hira Ampidiro .
2. Kitiho ankavanana ny anao fitaovana playback misy anao default ary tsindrio eo Properties , araka ny aseho.
3. Mifamadiha amin'ny Advanced kiheba avy any ambony, ary kitiho ny menio mitete-midina hisafidianana ny endrika audio default ambany kalitao.
Fanamarihana: Manoro hevitra anao izahay hisafidy ny endrika audio audio default ho 16 bit, 48000 Hz (kalitaon'ny DVD).
4. Farany, kitiho eo AMPIHARO ary avy eo ok hampihatra ireo fanovana ireo. Jereo eto ambany ny sary.
Vakio ihany koa: Fomba 8 hanamboarana tsy misy feo amin'ny Windows 10
Indraindray, ny mpamily ny tamba-jotra, toa ny, Realtek PCIe Family Ethernet Controller, dia mety hanelingelina ny adapter audio amin'ny rafitrao, izay mety hiteraka olana amin'ny fanodikodinam-peo amin'ny Windows 10. Ka noho izany amboary ny olana Windows 10 miakanakam-peo , tsy maintsy esorinao ilay mpamily tambajotra mifanohitra.
1. Tsindrio eo Soraty eto raha hikarohanao bara na ny kisary fikarohana. Karazana mpitantana Fitaovana , ary namely Ampidiro , araka ny aseho.
2. Kitiho ny Device Manager avy amin'ny valin'ny fikarohana handefasana azy.
3. Ao amin'ny Mpitantana Fitaovana varavarankely ary aforeto mankany amin'ny adaptatera Network. Tsindrio indroa amin'ny Adaptatera tambajotra hanitatra ny menio.
4. Toerana Realtek PCIe Family Ethernet Controller . Tsindrio havanana eo dia safidio esory avy amin'ny menio. Jereo eto ambany ny sary.
Windows adapter tambajotra 10 tsy hita
5. Hiseho eo amin'ny efijeryo ny varavarankely fanamafisana. Safidio eto Fafao ny rindrambaiko mpamily ho an'ity fitaovana ity.
Raha mbola mitohy ny olana miakanakam-peo dia andramo ny fanamboarana manaraka.
Raha be loatra ny fitaovana fampidiran-tsofinao sy ny output misy anao mifandraika amin'ny solo-sainao Windows 10, dia mety hifanelingelina izy ireo, ka hiteraka olana amin'ny fanodinkodinana feo. Amin'ity fomba ity,
a. Voalohany, ny amboary ny tabataban'ny feo ao amin'ny Windows 10 , ho foinay ny fitaovana fampidirana sy fivoahana rehetra.
b. Avy eo, hataonay tsirairay ireo fitaovana fanamafisam-peo hamaritana hoe iza amin'ireo fitaovana audio no miteraka olana am-peo.
Araho ireo dingana voatanisa etsy ambany raha hanao toy izany koa:
1. Mandrosoa Mpitantana Fitaovana araka ny nohazavaina ao amin'ny Fomba 3 .
2. Mikorisa midina ary kitiho indroa eo Fampidirana audio sy output hanitatra ny menio.
3. Tsindrio havanana amin'ny ny fitaovana audio rehetra voatanisa eto, tsirairay, ary safidio Atsaharo fitaovana . Jereo ny sary.
4. Rehefa tsy mandeha tsara ireo fitaovana audio rehetra, Haverina velomina ny solosainao.
windows 10 background miova hatrany
5. Manaraka, araho dingana 1-3 misafidy indray ary amin'ity indray mitoraka ity Alefaso fitaovana hahafahanao mamela ny iray amin'ireo fitaovana audio Hamarino raha mazava sy tsy voadika ny audio.
Raha sendra olana mampihetsi-po amin'ny rafitra Windows 10 ianao dia azonao atao ny mihazakazaka ilay Troubleshooter audio ao anatiny mba hamahana ilay olana. Araho fotsiny ireto dingana ireto:
1. Press am-baravarankely + I fanalahidy miaraka hanokatra ny Fikirana fampiharana amin'ny PC Windows 10 anao.
2. Mandehana mankany amin'ny Fanavaozana sy fiarovana fizarana, aseho.
3. Tsindrio eo Mamaha olana avy amin'ny tontonana amin'ny ankavia.
4. Tsindrio eo Troubleshooter fanampiny , araka ny aseho etsy ambany.
5. Safidio Milalao Audio ambanin'ny Fihetseham-po sy fihazakazahana faritra. Avy eo, kitiho eo Alefaso ilay troubleshooter . Jereo ilay sary nomena.
Ny troubleshooter dia hihazakazaka amin'ny rafitra Windows 10 anao ary hamaha azy io hatrany.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hanamboarana ireo serivisy audio tsy mamaly ao amin'ny Windows 10
Indraindray, manampy indray ny famerenana ny drafitra angovo CPU amboary ny tabataban'ny feo ao amin'ny Windows 10 . Noho izany, raha sendra fanodikodinam-peo na fijanonam-peo ianao rehefa mampiasa mpandahateny na headphone amin'ny rafitrao dia araho ireo dingana voalaza etsy ambany hamerenana ny drafitry ny herinao CPU.
1. Sokafy ny Fikirana fampiharana amin'ny PC-nao araka ny nanazavana tamin'ny fomba teo aloha. Tsindrio eo RAFITRA , araka ny aseho.
2. Tsindrio eo Hery sy torimaso avy amin'ny tontonana ankavia.
3. Kitiho Fikirana herinaratra fanampiny ambanin'ny Fikirana mifandraika eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery, araka ny aseho.
4. Ny drafitra herinao ankehitriny dia hiseho eo an-tampon'ny lisitra. Tsindrio ny Ovay ny fikirana drafitra safidy hita eo akaikiny. Jereo eto ambany ny sary.
5. Eto, kitiho ny Ovay ny fikirakirana herinaratra mandroso . Hisy varavarankely vaovao hiseho eo amin'ny efijeryo.
6. Tsindrio indroa amin'ny Fitantanana herinaratra fikirakirana hanitatra azy.
7. Tsindrio indroa amin'ny Fanjakana fampiasa farafaharatsiny SY Fanjakana farafaharatsiny fampiasa ary manova ny soatoavina ao amin'ny Amin'ny bateria (%) SY Ampidirina (%) saha ho 100 . Zahao ny pikantsary raha mila fanazavana.
8. Aorian'ny famerenanao ny drafitra herin'ny CPU, Haverina velomina ny solosainao.
Amboary ambany loatra ny feon'ny solosaina amin'ny Windows 10
Amboary ny olana momba ny audio Windows 10 Creators Update
Torolàlana amin'ny fampidinana Twitch VODs
Amboary ny lesoka nitranga 'Andramo indray' ID Playback ao amin'ny YouTube
Manantena izahay fa nanampy anay ny mpitari-dalana anay, ary afaka ianareo amboary ny feo miakanakam-peo na fanodikodinana ao amin'ny laharana Windows 10. Ampahafantaro anay izay fomba mety aminao indrindra. Raha manana sosokevitra / fangatahana ianao dia ampahafantaro anay ny fizarana hevitra etsy ambany.
usb dia manoratra Windows 10 voaaro
windows 10 fanavaozana ny totozy tsy mandeha
ny fifandraisana amin'ny serivisy fanavaozana windows dia tsy afaka napetraka.
Windows 10 tsy miala amin'ny wifi
maninona no tsy mandeha ny fampandrenesako ny instagram